ShweMinThar: #​နောက်​​ကြောကြွက်​သား (back) သိပ္ပံနည်းကျ ကစားမယ်​
Bodybuilder တစ်​​ယောက်​ဟာ ရင်​ဘတ်​ကြွက်​သား၊ ဆုံသား၊ လက်​​မောင်းသား များကြီးထွား ​နေရုံမျှဖြင့်​ ​ကျေနပ်​​နေလို့ မရ​သေးပါဘူး။ ​နောက်​​ကြောကြွက်​သားများ ထူထဲ ပြန့်​ကား ကြီးထွားမှု ကိုလည်း သတိပြု အာရုံစိုက်​ရမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။​နောက်​​ကြောကြွက်​သားများဟာလည်း ကိုယ်​ဟန်​ပြသည့်​ အခါ အ​ရေးပါသလို၊ ​နောက်​​ကြောကြွက်​သား ကြီးထွားပြန့်​ကားမှလည်း လှပ​ပေါ်လွင်​သည့်​ ခန္ဓာကိုယ်​ ကို ရရှိမှာဖြစ်​ပါတယ်​။​
​နောက်​​ကြော မှာ ပါဝင်​ ဖွဲ့စည်းထားသည့်​ ကြွက်​သား​တွေကို သိရှိမှ ကြွက်​သား​တစ်​ခုချင်းစီ ကြီးထွားရန်​ လိုအပ်​သည့်​ ​လေ့ကျင့်​ခန်းများကို ဦးစား​ပေးပြီး အားသွန်​ခွန်​စိုက်​ ​လေ့ကျင့်​နိုင်​မှာဖြစ်​ပါတယ်​။ အဲဒီ​တော့ ​နောက်​​ကြောကြွက်​သားများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ anatomy ကို သိဖို့ လိုအပ်​ပါတယ်​။ ဆက်​လက်​​လေ့လာကြည့်ပါမယ်​။
​နောက်​​ကြောကြွက်​သားများ အနက်​မှ ကိုယ်​ဟန်​ပြသည့်​ အခါ ​ပေါ်လွင်​ လှပ မှုကို ဦးစား​ပေးသည့်​ ကြွက်​သားများနှင့်​ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်​ အ​ရေးကြီးသည့်​ ကြွက်​သားများ အ​ကြောင်းကိုသာ အဓိက တင်​ပြသွားပါမယ်​။ လိုက်​ပါ ကစားကြည့်​ပါက လွန်​စွာမှ အကျိုးထူး တာကို သိရှိမှာဖြစ်​ပါတယ်​။
(၁) Middle Trapezius
(၂) Lower Trapezius
(၃) Latissimus doris
(၅) Erector spinae
​နောက်​​ကြောကြွက်​သားများအနက်​မှ အဓိက ကျသည့်​ ကြွက်​သားများကိုသာ ​​ဖော်​ပြအပ်​ပါသည်​။ ပုံ(၁) တွင်​​လေ့လာနိုင်​ပါသည်​။ ကြွက်​သား တစ်​ခုချင်းစီအလိုက်​ ကြီးထွားရန်​ သိပ္ပံ နည်းကျ ​ကစားနည်း​များကို ဆက်​လက်​ တင်​ပြသွားပါမယ်​။
​နောက်​​ကြောကြွက်​သား တစ်​ခုချင်းစီ အတွက်​ သီးခြား ​လေ့ကျင့်​ခန်းများရှိ​သော်​လည်း deadlift ​လေ့ကျင့်​ခန်း မှာ ​နောက်​​ကြောကြွက်​သား အားလုံး overall အတွက်​ အ​ကောင်းဆုံး​လေ့ကျင့်​ခန်းဖြစ်​ပါတယ်​။
​တော်​​တော်​များများ ကစားသမား​တွေဟာ deadlift ကို ​အောက်​​ပိုင်း ​နေ့မှာ ထည့်တာများပါတယ်​။ ကျွန်​​တော်​က​တော့ deadlift ကို back ​နေ့မှာ ကစားတာကို သ​ဘော​တွေ့ပါတယ်​။ deadlift က compound exe: ဖြစ်​ပြီး ​ကြောသား အ​ပေါ်ပိုင်း၊ ​ကြောသား ​အောက်​ပိုင်းကြွက်​သား​တွေကို ထိ​ရောက်​မှု ရှိပါတယ်​။ deadlift ​လေ့ကျင့်​ခြင်းဟာ ​​နောက်​​ကြောကြွက်​သားများ၏ thickness ထု ကိုပိုပြီး ထိ​ရောက်​​စေပါတယ်​။ injury ဖြစ်​နိုင်​​ခြေများ​သော​ကြောင့်​ ​လေ့ကျင့်​မှု ပုံစံကျရန်​လိုပါသည်​။ ပုံ(၂) တွင်​​လေ့လာနိုင်​ပါသည်​(သို့) utube နှင့်​ နည်းပြထံမှ အကူအညီရယူနိုင်​ပါသည်​။
ဒီ​နေရာမှာ ဂုတ်​သားနှင့်​ ​ရော​ထွေးမသွားရန်​ ဂရုပြုရပါမည်​။ Middle Trapezius ကို ​ကြောအလယ်​ကြွက်​သား ဟု နားလည်​လွယ်​ရန်​ ဘာသာပြန်​ချင်​ပါသည်​။ပုံ(၁) တွင်​ထပ်​မံ​လေ့လာနိုင်​ပါသည်​။ ကစားသမားတစ်​ဦးနှင့်​ တစ်​ဦး၏ ကြွက်​သား ဖွံ့ဖြိုးမှု က လုံးဝ မတူညီပါ။ တစ်​ချို့မှာ Latissimus doris လို့​ခေါ်တဲ့ ဝင်းသား အား​ကောင်းပြီး၊ တစ်​ချို့မှာ Middle Trapezius အား​ကောင်းတဲ့သူ​တွေ ရှိပါသည်​။ မိမိ၏ အားနည်းသည့်​ ကြွက်​သား အစိတ်​အပိုင်းကို ဖြည့်​စွက်​ပြီး ကစားချင်​​သော်​လည်း၊ ​လေ့ကျင့်​နည်း မသိပဲ မိမိအမြဲကစား​လေ့ရှိသည့်​ ​လေ့ကျင့်​ခန်းဟာ အား​ကောင်းသည့်​ ကြွက်​သား အတွက်​သာ ဖြစ်​မှန်းမသိ၊ ဖြစ်​​နေသည့်​ ကစားသမားများ အတွက်​ သိပ္ပံ နည်းကျ တင်​ပြခြင်းဖြစ်​ပါသည်​။
Middle Trapezius ကိုသာထိ​ရောက်​သည့်​ ​လေ့ကျင့်​ခန်း များအနက်​မှ inverted row ဖြင့်​ မိတ်​ဆက်​​ပေးချင်​ပါသည်​။
Smith machine (သို့) ဘား​ချောင်းအား ခါးအမြင့်​​လောက်​တွင်​ ထားပါ။ ခန္ဓာကိုယ်​ ဟာ ဘား​ချောင်း​အောက်​တွင်​ ပက်​လက်​ အ​နေအထားဖြင့်​ ဘား​ချောင်းအားဆုပ်​ကိုင်​ပါ။ လက်​များဟာ မိမိ ပုခုံး အကျယ်​ခန့်​ဖြစ်​ရပါမည်​။ ​ခြေဖ​နောင့်​အား ​မြေပြင်​တွင်​ထိထားပြီး ခန္ဓာကိုယ်​ ဟာ ​လေထဲတွင်​​ဖြောင့်​တန်း​နေရပါမည်​။ လက်​များအား ဆွဲတင်​ပြီး ဘား​ချောင်းနှင့်​ ရင်​ဘတ်​ ထိသည်​အထိဆွဲတင်​ပြီး​ဖြေး ညှင်းစွာ ပြန်​ချရပါမည်​။ Utube (သို့) နည်းပြအကူရယူပါ။
Middle Trapezius အတွက်​ ကစားနည်းများထဲမှ inverted row ​လေ့ကျင့်​နည်းဟာ အထိ​ရောက်​ဆုံးဖြစ်​သည်​ကို အခြား​လေ့ကျင့်ခန်း(၈) မျိုးဖြင့်​ နိုင်းယှဉ်​ ပြသထားသည့်​ ဇယားအား ပုံ(၃) တွင်​​လေ့လာနိုင်​ပါသည်​။ ကစားသည့်​ ပုံစံအား ပုံ(၄) တွင်​​ဖော်​ပြထားပါသည်​။
(၃) Lower Trapezius
Lower Trapezius ကိုသာထိ​ရောက်​သည့်​ ​လေ့ကျင့်​ခန်း များအနက်​မှ I.Y.T raises ဟာ Lower Trapezius အတွက်​ အထိ​ရောက်​ဆုံးဖြစ်​​ကြောင်း graph ဇယားပုံ(၅) တွင်​​လေ့လာနိုင်​ပါသည်​။ သို့​သော်​ စာ​ရေးသူ ကျွန်​​တော့်​အ​နေဖြင့်​ I.Y.T raises ကစားမည့်​အစား inverted row ကို ကစားခြင်းဖြင့်​ Middle Trapezius ကို ထိ​ရောက်​သည့်​အပြင်​ Lower Trapezius ကိုပါ အထိုက်​အ​လျောက်​ထိ​ရောက်​​သော​ကြောင့်​ အချိန်​ကုန်​ခြင်း၊ ပင်​ပန်းခြင်းမှ သက်​သာရန်​ inverted row တစ်​ခုကိုသာ ကစားခြင်းဖြင့်​ Middle and Lower Trapezius နှစ်​ခု လုံး ကို တစ်​ပြိုင်​နက်​ထိ​ရောက်​သဖြင့်​ inverted row ကစားလျင်ပင် ​​လုံ​လောက်​ပြီဖြစ်​ပါသည်​။ သို့​သော်​ Lower Trapezius သာ အားနည်းပါက I.Y.T raises သာ ကစားရန်​ဖြစ်​ပါသည်​။ ကစားနည်းအား utube တွင်​​လေ့လာပါ။
(၄) Latissimus doris
​နောက်​​ကြောကြွက်​သားထဲမှာ အလှပဆုံးနှင့်​ အထင်​ရှားဆုံးဖြစ်​တဲ့ ကြွက်​သားက​တော့ Latissimus doris လို့​ခေါ်တဲ့ ဝင်းသား ပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ​နောက်​​ကြော ဝင်းသား ကြီးထွားရန်​ သီးသန့်​​လေ့ကျင့်​ခန်းများထဲမှ အထိ​ရောက်​ဆုံး ​လေ့ကျင့်​ခန်း က​တော့ အားလုံးသိထားတဲ့ လက်​အကျဲတန်းခို pull-up ပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ pull-up ဟာ ​နောက်​​ကြော ဝင်းသား အတွက်​ တစ်​ခြား​လေ့ကျင့်​ခန်းများထက်​ ပိုမို အထိ​ရောက်​ဆုံး​လေ့ကျင့်​ခန်းဖြစ်​တယ်​ဆိုတာ ​ဖော်​ပြထားတဲ့ ပုံ(၆) ဇယားကိုသာ ​လေ့လာကြည့်​ပါ။
Infraspinatus ကို​တော့ လက်​ပြင်​ ကြွက်​သားလို့ပဲ နားလည်​လွယ်​​အောင်​ ဘာသာပြန်​ချင်​ပါတယ်​။ လက်​ပြင်​ကြွက်​သား၏ ​ပေါ်လွင်​လှပမှု ဟာလည်း စင်​မြင့်​ထက်​တွင်​ back position ပြသည့်​အခါ အ​ရေးပါသည့်​ ပြကွက်​တစ်​ခု ဖြစ်ပြီး ကြွက်​သား​ပေါ်လွင်​လှပမှု ဟာ ဆွဲ​ဆောင်​မှု ရှိလှပါတယ်​။ Infraspinatus လက်​ပြင်​ကြွက်​သား ကြီးထွားဖို့အတွက်​ဆိုရင်​​တော့ IYT raise, invrtted row, bent over row နှင့်​ pull up ​တွေက အထိ​ရောက်​ဆုံးဖြစ်​​ကြောင်း ဇယား/ပုံ(၇) တွင်​​လေ့လာနိုင်​ပါသည်​။ ကျွန်​​တော့်​အ​နေနှင့်​က​တော့ inverted row နှင့်​ pull up ​လေ့ကျင့်​ခြင်းဖြင့်​ Infraspinatus ပါ ထိ​ရောက်​​သော​ကြောင့်​ မိမိ ကစားသည့်​ အချိန်​ ကြာမြင့်မှု ၊ပြုလုပ်​ရသည့်​ ​လေ့ကျင့်​ခန်းများပြားမှု၊ စသည်​တို့ကို ချိန်​ဆ ပြီး နည်းပြ အကူအညီ ရယူကာ ​လေ့ကျင့်​ရမည့်​ ​လေ့ကျင့်ခန်း workout ကို ​ရွေးချယ်​ရပါလိမ့်မယ်​။
(၆) Erector spinae
Erector spinae ကြွက်​သားက​တော့ Lower Trapezius ကြွက်​သားအလွှာ၏ ​အောက်​မှာတည်​ရှိပါတယ်​။ Erector spinae ကြွက်​သား၏ လုပ်​​ဆောင်​ပုံ​တွေကို အကြမ်းဖျဉ်း ​ယေဘူယျ တင်​ပြရရင်​ ခန္ဓာကိုယ်​ ယိမ်းယိုင်​မသွား​အောင်​ အတွက်​ ထိမ်း​သိမ်း​ပေးတဲ့ အဓိက ကြွက်​သား​တွေထဲမှ အပါအဝင်​ဖြစ်​ပါတယ်​။ Erector spinae ကြွက်​သား အား​ကောင်း​လေ​လေ stability နှင့်​ strength ​ကောင်းပြီး၊ squat ထိုက်​ထ လုပ်​သည့်​အခါနှင့်​ အတွန်း၊ အဆွဲ ​လေ့ကျင့်​ခန်းများတွင်​လည်း အားသွန်​ခွန်​စိုက်​ ရုန်းကန်​ပြီး ကစားနိုင်​တာကို ​တွေ့ရပါတယ်​။Erector spinae ​လေ့ကျင့်​နည်းများထဲမှ အ​ကောင်းဆုံး​လေ့ကျင့်​နည်းကို ဇယား/ပုံ(၈)တွင်​​လေ့လာကြည့်​ပါက bent over row ကို​တွေ့ရမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။ စာ​ရေးသူ ကျွန်​​တော့်​အကြိုက်​က​တော့ Erector spinae ကြွက်​သား ကျမ်းမာ​၊သန်​စွမ်းဖို့အတွက်​ဆိုရင်​ deadlift ကို အကြိုက်​ဆုံးပါပဲ။​ဖော်​ပြထား​သည့်​ သု​တေသန ပြုလုပ်​ထား​သော ဇယားနှင့်​​တော့ အနည်းငယ်​ကွဲလွဲ​နေပါတယ်​။ သို့​သော်​ deadlift ဟာ back ကြွက်​သား overall အတွက်​ အ​ကောင်းဆုံး ​လေ့ကျင့်​ခန်း ဖြစ်​တဲ့အတွက်​ နံပတ်​(၁) မှာ​ဖော်​ပြခြင်းဖြစ်​ပါတယ်​။
* အထက်​​တွင်​ ​နောက်​ကြောကြွက်​သား ၏ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့်​ ပါဝင်​ပတ်​သက်​​နေသည့်​ ကြွက်​သားတစ်​ခုချင်းစီ အလိုက်​ သီးခြား​လေ့ကျင့်​နိုင်​ရန်​ နည်းလမ်းများကို တင်​ပြထားပြီး ဖြစ်​ရာ ကစားသက်​ အ​တော်​အတန်​ရှိပြီး မိမိ၏​​​နောက်​ကြောကြွက်​သား တိုးတက်​မှုနှုန်းနဲပါးပါက အားနဲသည့်​ ကြွက်​သားအစိတ်​ပိုင်းကို ဖြည့်​စွက် ကစားနိုင်​ရန်​ အတွက်​ နည်းလမ်းတစ်​ချို့အား ​ဖော်ပြခြင်းသာ ဖြစ်​ပါသည်​။ ကြွက်​သား အစိတ်​ပိုင်း အလိုက်​ သီးသန့် သတ်​မှတ်ထားသည့် form ပုံသဏ္ဍာန်​ ကို လိုက်​ပါ ​​ကစားခြင်းဟာ သတ်​မှတ်​ထားသည့်​ ကြွက်​သားကို ပိုမို ထိ​ရောက်​​စေပါသည်​။
(Beginner များအတွက်​​တော့ ​နောက်​​ကြောကြွက်​သား ကစားမည်​ဆိုပါက ခန္ဓာကိုယ်​ ကို အဓိကကြီးထွား ဖွံ့ဖြိုးရန်​အတွက်​ deadlift (သို့) lat pull-down နှင့်​ bent over row ကို အကြိမ်​အ​ကျော့ မများ​စေပဲ ပူးတွဲ ကစားရင်​ပဲ လုံ​လောက်​ပြီ ဖြစ်​ပါတယ်​။)
# ဒီ​နေရာမှာ တစ်​ခု​မေးစရာ ရှိတာက​တော့...ကြွက်​သားများ အစွမ်းကုန်​ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားရန်​ တစ်​ခါကစားလျင်​(သို့)တစ်​ချိန်​တည်းတွင်​ အကြိမ်​/အ​ကျော့ ဘယ်​​လောက်​ ကစားရမလဲ ? တစ်​ပတ်​မှာ ဘယ်​နှစ်​ကြိမ်​/​ဘယ်နှစ်​ ​​​ကျော့ ကစားရမလဲ ? အားလုံး စုစု​ပေါင်း အကြိမ်​/အ​ကျော့ တစ်​ပတ်​ အတွင်း ဘယ်​​လောက်​ ကစား သင့်​သလဲ ? ကြွက်​သားကြီးများ(ရင်​ဘတ်​၊ ​ပေါင်​၊ ​နောက်​​ကျော..)နှင့်​ ကြွက်​သားအ​သေးများ(လက်​​မောင်း​ရှေ့၊​လက်​​မောင်း​နောက်​၊​ခြေသလုံး...) အား အကြိမ်​/အ​ကျော့ တူစွာ ကစားလို့ရပါသလား ? စသည့်​ ဗဟုသုတ ဖြစ်​ဖွယ်​ အ​ကြောင်းအရာ များကို သိပ္ပံ နည်းကျ ဆက်​လက်​၍ ​နောက်​ပိုင်းတွင်​ ​ဖော်​ပြ​ပေးသွားပါမည်​။
Posted by Alex Aung at 6:25 AM